လှည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာကနေစိတ်အားထက်သန်ဖို့စူပါသိန်ကားများကိုဖန်တီးရန် - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
ရို Daskalov စူပါတစ်ဦးလေယာဉ်မှူး, အင်ဂျင်နီယာ, ဒီဇိုင်နာနှင့် Rousse မြို့ကနေလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူကတစ်ဦးအလွန်အစောပိုင်းအသက်အရွယ်ကနေပြိုင်ကားအသေးစားမောင်းခြင်းပြိုင်ကားသမားအဖြစ်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ခဲ့သည်နှင့် 1989 အတွက်သူအမျိုးသားရေးအသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အဲဒီနောကျသူသညျမိမိစီးပွားရေး၏အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးသားထားပါတယ်။ ယခုနှစ် 2010 ခုနှစ်တွင်သူဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ပြိုင်ကားအသေးစားမောင်းခြင်းလူမျိုးစည်းရုံးရေးစတင်သည်။ နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့များ၏စုရုံးဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲထိုနောက်မှစတိုင်နှင့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်မောင်းနှင်မှု၏လမ်းအဖြစ်ပြိုင်ကားအသေးစားမောင်းခြင်းနှင့်အနီးဆုံးဖြစ်သော, စုံလင်ပြိုင်ပွဲကားတစ်စီးကိုရှာဖွေရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ သူတော်တော်များများကားများကိုချွတ်ပြောင်းလဲပေမယ့်သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှမိမိအစံနှုန်းများကိုက်ညီမှု။
ဒီတော့ 2012 အတွက် Autosport မှာခရီးစဉ်များကသူ့ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ငယ်ပြိုင်ပွဲရောနှောကားတစ်စီးဖန်တီးရန်စိတ်ကူးမွေးဖွားသည်။ အဆိုပါကားကိုသာအလွန်အထင်ကြီးခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်အင်ဂျင်နှင့်အတူဒါပေမယ့်လည်းအရည်အသွေး, အာဏာနှင့်စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်. ၌တူညီသောလူတန်းစား၏အခြားကားများမှလုံးဝယှဉ်ပြိုင်လို့ယူဆတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အိပျမရတဲ့ည၏တစ်နှစ်ပြီးနောက်, အလုပ်ကြိုးစားမှုရလဒ်တွေကိုပေးသည်နှင့်အပြစ် CARS ၏အသင်းသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရှေ့ပြေးပုံစံအပြစ် R1 မိတ်ဆက်။ နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ယင်း အပြစ်ကားများ ဥရောပချန်ပီယံမှာ - Red Bull Ring ကိုမှာတိုင်အနေအထားနှင့်ဒုတိယနေရာတွင်ပထမနေရာ။ အဆိုပါမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းနှင့်အောင်မြင်မှုတွေကိုဆက်လက် - 4-2 အောက်တိုဘာလ4အပေါ်အရပျကိုလုယူသော GT2015 ဥရောပစီးရီး၏နောက်ဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှု, - လူတန်းစား PRO နှင့်အပြစ်ကားများနှင့် Misano Adriatico အီတလီမှာဆိုဖီယာမော်တော်ကားတပ်အားကစားဘို့တတိယယေဘုယျရာအရပျမှာနောက်ဆုံးပေါ်များမှာဒုတိယနေရာအချို့ ။ မပေးသူတို့သာပြီးသားတိုးတက်မှုအတွက်သူတွေကိုလည်းစစ်မှန်တဲ့ လာ. , ဒါပေမယ့်ကြပြီ - ယနေ့ရို Daskalov ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်တော်တိုင်နှင့်သူ၏အိပ်မက်အကြောင်းကိုနည်းနည်းပိုပြောပြရန်ငါနှင့်အတူပါကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ .. ငါရက်အတွင်းပိုမိုကျောနည်းနည်းမှာ start သငျ့သညျ။ ကျွန်မတို့မိသားစုဟာတပ်အားကစားမိသားစုဖြစ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏အဖိုးကသူနေထိုင်တဲ့ရွာ၌စပါးရိတ်၏ပြုပြင်ရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါအကြှနျုပျအဘနှငျ့ငါ့ဦးလေးကသူကမောင်းမပြုခဲ့အခြိနျမှာမိမိမော်တော်ဆိုင်ကယ်ယူလမ်းကြောင်းကိုသွားလေ၏။ အဲဒီမှာယှဉ်ပြိုင်မှုမှအမှန်တကယ်အဖေအတိတ်ထဲကနေမော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့လူတွေအတွက်မော်တော်ကားအတွက်အတော်လေးစိတ်အားထက်သန်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မကလေးတစ်ဦးအဖြစ်ပြိုင်ကားအသေးစားမောင်းခြင်းနှင့်အတူစတင်ခဲ့တယ်။ ထိုအခါငါကလူယေဘုယျအားဖြင့်ဆိုရအဖြစ်သူ့ကိုကူညီခြင်းနှင့်ဤအရပ်မှခဲ့ပါတယ် "ဟုအဆိုပါပန်းသီးသစ်ပင်ကနေဝေးလဲကြပါဘူး။ "
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမြဲကားများချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ကြှနျုပျတို့လညျးပြုပြင်ရေး, ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, အားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများ, မော်တော်ကားအရောင်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်။ ဒါဟာဝေးကြောင်းကနေဘယ်တော့မှခဲ့ပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုဖန်ဆင်းသောဤမဟုတ်ဘဲကြီးမားသောခြေလှမ်းကိုသင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့သကဲ့သို့ငါ့ကို Race ရန်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးကားတစ်စီးကိုရှာဖွေစင်ကြယ်သောထကြွလွယ်သောအလိုဆန္ဒတို့ကနှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာခဲ့သည်။ ငါတော်တော်များများကားများဝယ်ငါကြိုးစားခဲ့, ကျနော်တို့အမြင်များထဲမှအချက်အနေဖြင့်ဆိုရကြောင့်, ကြီးစွာသောအတွေးအခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကြောင်းကိုသိမြင်လျှင်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အမှုအရာသို့နက်ရှိုင်းကိုင်တွယ်ရန်စတင်သောအခါအကတော်တော်လေးကြီးမားတဲ့အတွေးအခေါ်ဖြစ်ထွက်လှည့်။
အဘယ်အရာကိုငါသည်သင်တို့ပြောပြနိုင်အားလုံးငါရှိခဲ့သောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုနိုင်သူကိုလက်ျာလူမျိုး, ရှာတွေ့နဲ့စတင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အင်္ဂလန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ 30-40 နှစ်ပေါင်း, စီးပွားရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများကဒီမျိုးအတွက်အလွန်ရှည်လျားသောအတှေ့အကွုံရှိသည်။ ငါသူတို့က, ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာငါ့ကိုပဲ့ထိန်းငါ့ကိုလိုအပ်သောအဆက်အသွယ် ပေး. , အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်ညာဘက်လူတွေဖြတ်ပြီးလာကြ၏။ အဆိုပါအခက်အခဲများကျနော်တို့အမှုအရာကဒီမှာဘူလ်ဂေးရီးယားဖြစ်ပျက်စေလိုသောအခြေခံအားဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကဒီမှာလှုပ်ရှားမှု၏ဤမျိုးအတွက်လေ့ကျင့်ရေးသူလူငယျပတ်ဝန်းကျင်, မရှိကြပါဘူး။ ကျနော်တို့ငါယခုအချိန်တွင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ငါပေးသောအနေနဲ့ဒီထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အတွေ့အကြုံ, ပညာတတ်လူများနှင့်ဒါပေါ်မှာ .. ဒါဟာအကြီးမားဆုံးပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ရှိသည် don`t ။ သင်သည်လက်ျာအဆက်အသွယ်များနှင့်ဂြိုဟ်တုလှုပ်ရှားမှုပြုပါနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစီမံကိန်းများကိုတစ်အချို့အသေးစိတ်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တိုးတက်မှုကိုကူညီနိုင်သူကိုလက်ျာလူမျိုး, ရှိပါကအခြားသောအရာတို့ကိုဒါရှုပ်ထွေး aren`t ။
ပြီးသားလမ်းပေါ်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြောင်း FIA နှင့်မော်တော်ယာဉ်၏ကမ္ဘာချန်ပီယံအတွက် GT10 စီးရီးများအတွက် homologated သောပြိုင်ကား - ဒီအခိုက်အတန်အချိန်အထိကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုလမ်းညွန်ထဲမှာအဓိကအားဖြင့်အပိုင်းပိုင်းခွဲထားတဲ့4န်းကျင် vehicles- မကြီးမားတဲ့အရေအတွက်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ Frankfurt အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာလမ်းပေါ်မှာကားတစ်စီး၏မော်ဒယ်ပေးအပ်သည်။ အဲဒီနှစျခုကားများသူတို့ကဆင်တူကြည့်ရှု, ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်အခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားကြသည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အဓိကအားဖြင့်ရည်ရွယ်ထားသောလူများ၏မတူညီသောအမျိုးအစားများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောကား, ... စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ခေတ်ပြိုင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတူဆွဲဆောင်မှုအတော်လေးဇိမ်ခံဖြစ်ရမည်ထွက်လှည့်။ အဲဒီအလုပ်ကဒီမျိုးအတွက်အပိုဆောင်းစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤသည် it..technology, လုပ်ငန်းစဉ်များ, အဆက်အသွယ်ညာဖက်ကလူ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ...
အားလုံးမှန်ကန်သော sequence ကိုအတွက်ကွင်းဆက်အဖြစ် knotted သင့်ကြောင်း, ဖြစ်ရပ်မှန်များများထဲမှအဆုံးမဲ့လိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဒီမှာနှင့်ပြည်ပမှာမြောက်မြားစွာပြိုင်ပွဲနှင့်ဝိုင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့ကြပါပြီ။ ပြည်ပမှာကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်သူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဘာတွေလဲ? သငျသညျပြီးသားအမိန့်ရှိသည်နှင့်လူမျိုး၏အဘယ်အရာကို type ကိုသင့်ရဲ့ကားများစိတ်ဝင်စားအလားအလာဖောက်သည်များမှာသလား?
ကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့ကြရသောအဆိုပါပြိုင်ပွဲနှင့်ဝိုင်း, အင်္ဂလိပ်ချန်ပီယံ GT ကိုဖလားနှင့်ဥရောပ GT4 စီးရီးထဲမှာအဓိကအားဖြစ်ကြသည်။ ယေဘုယျအားယခုတိုင်အောင်ငါတို့သည်အလွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်အတွင်းအားကစား-ကားတစ်စီးပြိုင်ကားနှင့်ပတ်သက်သောပြပွဲလွဲချော်ကြပြီမဟုတ်။ ကျနော်တို့အများဆုံးဂုဏ်သတင်းပြပွဲမှာအင်္ဂလန်မှာဖျော်ဖြေသုံးနှစ်ရှိသည်။ ဤနှစ်တွင်ငါတို့သည်ဂျီနီဗာအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပါလိမ့်မယ်နွေဦးအတွက်ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေရိကန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူ Indianapolis အတွက်တရားမျှတတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက် Frankfurt နဲ့ပါလိမ့်မယ် ...
အလားအလာဖောက်သည်ခဲထိုကဲ့သို့သော Exposition ထံသို့လာလိမ့်မည်ဟုသူတို့အားဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့်မှာအားလုံးငါတို့လိုလူတွေနှင့်အဆက်အသွယ်သို့ကွှလာမပါဘဲပြန်နှင့်ထွက်ခရီးသွားလာ, သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ထဲမှာတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်နေထိုင်နေကြပေမယ့်အဲဒီစက်ဝိုင်းရှိလူများနှင့်အတူအဆက်အသွယ်ရှိသည်နှင့်ငါကားတစ်စီးပေးအပ်သည်။ အဲဒီမှာသူက၌ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ဒီနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ခြားနားချက်ရှာနေကြသူသီးသန့်လိုသူဖောက်သည်များ, ရှာနှင့်တစ်ဦးလက်ကိုကားများအတွက်ငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ဖို့လိုလိုလားလားရှိနေကြသည်။
ဒါကြောင့်လွတ်လပ်စွာနှင့်အောင်မြင်စွာသူ / သူမ၏စိတ်ကူးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လူငယ်တစ်ဦးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ခက်ခဲလား? အဘယ်အရာကိုစိန်ခေါ်မှုများကြုံတွေ့ရနှင့်မည်သို့သင့်ရဲ့သွားရာလမ်းပေါ်တွင်အတားအဆီးကိုကျော်လွှားသလဲ?
ကျနော်တို့ဘူလ်ဂေးရီးယားမှာနေထိုင်အပေါင်းတို့နှင့်တကွကျွန်တော်တို့ရဲ့သတိဘဝတစ်လျှောက်လုံးကဒီမှာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျွန်မအဖြစ်ကောင်းစွာဂျာမနီနှင့်အင်္ဂလန်မှာလည်းကုမ္ပဏီရှိသည်။ ငါဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်လိုအပ်သောအလိုဆန္ဒနှင့်အတူအမှုအရာသည်ဥရောပနိုင်ငံအတော်များများအတွက်ထက်ပင်အများကြီးပိုလွယ်ဖွစျနိုငျကွောငျးကိုပွောဆိုနိုငျသညျ။ ငါအရာအခြို့အတွက်ကျနော်တို့အများကြီးပိုရုပ်ဆိုးဖြစ်ကြောင်းပြောရဲ။ ဒီဘူလ်ဂေးရီးယားဖြစ်ပျက်မနိုင် - ငါ homologation နှင့် ပတ်သက်. အချို့သောဗျူရိုကရေစီအတားအဆီးများ Naturalis ရှိပါတယ်ပြောခဲ့သကဲ့သို့။ အနည်းဆုံးကျနော်တို့အတော်လေးဥရောပတိုက်တွင်, ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေအတွက်ပျမ်းမျှအဆင့်ကိုနောက်ကွယ်မှများမှာအချို့သောရှုထောင့်၌ငါအားသာချက်လည်းရှိပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ခိုင်မြဲစွာကျနော်တို့ကားထဲတွင်အခြေခံဘူလ်ဂေးရီးယားထုတ်လုပ်ခံရဖို့ချင်သောနောက်ကွယ်မှရပ်တယ်။
အပြစ်ကားများ၏တည်ထောင်ခြင်းအပြင်, သငျသညျကိုလညျးအမှတ်တံဆိပ် BMW ကားများအတွက် Rousse အတွက်သာအခွင့်အာဏာဝန်ဆောင်မှုအပါအဝင်သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအရာကြွင်းလေနှင့်အတူကိုင်တွယ်။ ငါသည်လည်းသင်တို့ရှိသမျှလှုပ်ရှားမှုများ၏ကတိကဝတ်ပေါင်းစပ်ကြဘူးဘယ်လို .. ဆဲအသစ်တစ်ခုပြိုင်ကားအသေးစားမောင်းခြင်းလမ်းကြောင်း၏ဖန်တီးမှုကြောင်းကြားသိ?
ငါသာကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်လုပျနိုငျဘာမျှရှိပါသည်။ ကျနော်တို့လူတို့နှင့်အတူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျနော်တို့အပြုအမူနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏တစ်ဦးစတိုင်ရှိသည်ထင်ကျနော်တို့လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်သွားရန်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ် - ။ သင်တန်း၏ငွေပေးချေမှုများအတွက်ဤကြိုးပမ်း၌ငါ့ကိုထောကျပံ့ပေးပေမယ့်အားလုံးပိုက်ဆံအဓိကမောင်းနှင်အချက်မဟုတ်ပါဘူးပြီးနောက်သူတွေကို ကျနော်တို့ဒါအပေါ် ROUSSE မြို့အဘို့အအကြီးဆုံးအားကစားဖြစ်ရပ်သည်နှင့်အရာ "Spartakiada" နှင့်တိုက်နယ် Rousse (PISTA ROUSSE), နဲ့တူလယ်ပြင်အားကစားဖြစ်ရပ်များပါစေ။ ကြှနျုပျတို့သညျဤစိတ်ကူးတလျှောက်သို့ရောက်လာသောလမ်း, ငါတို့ခဲ့သောပြိုင်ကားအသေးစားမောင်းခြင်းလမ်းကြောင်း, ကတည်းကကြောင့်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တည်ရှိခဲ့သည်ရှိရာ Mall ကဒေဝါလီခံကြေညာထားပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှယခုအချိန်တွင်တည်ရှိရန်ဝမ်းနည်းစွာနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တိုင်းတစ်ခုတည်းကလေးသည်၎င်း၏မိဘများကထွက်ခွာသွားနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာပြီးနောက်-လူတန်းစားလှုပ်ရှားမှုများများအတွက်စင်တာစုစည်းချင်ဒီနရောမှာ, ကျောင်းပြီးနောက်အချိန်ဖြုန်းဖို့ဥပမာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိဘဲ, အသုံးဝင်သောလိမ့်မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုအတွင်း - အကြိုက်ဆုံးဘာသာရပ် ie, အားကစား , ပန်းချီ, သူတို့ရဲ့အားလပ်ချိန်၌ဤပြုကြလိမ့်မည်သူကိုဆရာ, ဆရာမနှင့်အတူဒါပေါ်မှာသင်္ချာနဲ့။ ကျနော်တို့မြို့တော်စည်ပင်ကအတူဤစီမံကိန်းလုပ်ပါ။ နှင့်သင်တန်း၏နွေရာသီစဉ်အတွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့်ကျောင်းခြံအတွက်သေးငယ်တဲ့ပြိုင်ကားအသေးစားမောင်းခြင်းလမ်းကြောင်းရှိရလိမ့်မည်။ ကံမကောင်းစွာပြုလုပ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလစဉ်အတွင်းအသုံးပြုမရနိုင်ဘူး။
တရားပါတယ်။ သင်တို့အဘို့အလာမယ့်စိန်ခေါ်မှုများဘာတွေလဲ? အဘယ်မှာရှိအပြစ်ဖြေကားများအဘို့သင့်အိပ်မက်မှရောက်ရှိသလဲ?
အိုးစိန်ခေါ်မှုများသာထိုအကားများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နေကြသည်။ သဘာဝကျကျကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးနှင့်အဓိကတာဝန်စုစည်းနှင့် Rousse တည်ရှိသောသောစက်ရုံ, ခေတ်မီဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တစ်လလျှင်တစ်ဆယ်ကားများထုတ်လုပ်ရန်နိုင်ပါလိမ့်ချင်တယ်။ နောက်တစ်နေ့တာဝန်ငါးနှစ်ကြာအပြီးတည်ဆဲတဦးတည်းကိုအစားထိုးသင့်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အနည်းဆုံးငါတို့ရှေ့မှာလာမယ့်ငါးနှစ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အလုပ်တွေအများကြီးရပါလိမ့်မယ်အရာသစ်တစ်ခုမော်ဒယ်စဉ်းစားရန်ဖြစ်ပါသည်။
ငါကအလုံအလောက်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ ငါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး doesn`t သာဘဏ္ဍာရေးရလဒ်စဉ်းစားနဲ့သူကချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူလုပ်ဖို့လိုလားဘယ်သို့သောအကြောင်းနှင့်ဝိညာဉ်နှင့်တကွနှလုံးထဲကထင်နှင့်ဤအရာအဘို့ရှိသမျှကိုကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်ရည်မှန်းချက်ကိုထည့်လေ့မရှိ, အမှုအရာအစဉ်အမြဲဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်လျှင်ထင်ပါတယ်။ တဖန်သင်တို့ဆီလျှော်သည်မဟုတ်, သင်ကအတူပဲသွားနှင့်သာအမြတ်အစွန်းရှာအံ့သောငှါလျှင်, အကြှနျုပျအဘို့အရာတို့ကိုပုံပျက်နေကြသည်နှင့်အစဉ်အမြဲအောင်မြင်မှုမဆောင်ခဲ့ဘူးသောဘဏ္ဍာရေးအကောင့်နှင့်အတူသွားလျှင်။
တိုင်းအောင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဆုံးစွန်ပန်းတိုင်၏မျက်နှာကို ထောက်. အောင်မြင်မှုရဲ့လမ်းပေါ်ယဇျပူဇျောအချို့ကြင်နာပါစေရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဘယ်သူသည်သို့မဟုတ်သင်သည်အဘယ်သို့အောင်မြင်မှု၏နာမ၌လုပ်ဖို့ခဲ့သောအကြီးမားဆုံးလိုက်လျောရှိပါသလဲ တဖန်သင်တို့ထိုသို့သောယဇ်ဖြစ်စေခြင်းငှါစွန့်စားမှုယူဝံ့ကြဘူးသောသူတို့အားအဘယ်သို့ဆိုမည်နည်း
အပြစ် CARS - အပေးအယူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားတစ်စီး၏နာမ၌ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ခံအပြစ်တရားကျနော်တို့ယခုအချိန်တွင်ဤစီမံကိန်းအပေါ်အားလုံးနီးပါးကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ဖြုန်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ငါအနာဂတျမှာကျွန်တော်တစ်ဦးအနည်းငယ်ပိုအခမဲ့အချိန်ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်, သို့သော်ဤငါ၏အဝါသနာဘယ်အချိန်မဆိုရဖို့စီမံခန့်ခွဲကြဘူးနဲ့တူဖြစ်ကြောင်းမိသားစု, သားသမီး, ဝါသနာ, .. သည်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများကိုဆိုလိုသည်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုတနင်္ဂနွေကျနော်တို့အပြည့်အဝကိုသိမ်းပိုက်လိမ့်မည်ဆိုလိုတာကတစ်လလျှင်တခါတရံ2လူမျိုးရှိသည်။ ထိုအခါမှသာဝိုင်းအတွက်တင်ပြချက်များ, ပါဝင်မှု, စသည်တို့ရှိ .. သင်ကိုယ်တိုင်ကထွက်တွက်ဆနိုင်သောအချိန်အလွန်မြန်ဆန်စွာထွက်ပြေးခြင်းနှင့်အခြားဘာမှမအချိန်လည်းရှိ၏။
သင်သည်သင်၏ကားများတစ်ဦးယာဉ်မောင်းအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သြစတြီးယားတိုက်နယ် Red Bull Ring ကိုအပေါ်ဥရောပ GT4 စီးရီးထဲမှာပါဝင်မှုစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့နောက်ဆုံးမောင်းနှင်မှုအားဖြင့်သင်ကျေးဇူးတင်စရာအသက်ရှင်လျှက်ကျန်းမာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တယ်ရာမှတစ်ဦးလေးနက်မတော်တဆမှုခံစားခဲ့ရသည်။ အဆိုပါလေယာဉ်ပျက်ကျမှုခဲထားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်တယ်လို့ - Jorge Viebahn - - လမ်းထဲကသင်တို့အားတွန်းဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုရှင်းလင်းစွာအခြားပြိုင်ဘက်ကြောင်းပြသထားတယ်။ ငါကဲ့သို့သောသာမန်ဘေးကနေ၏မကျြမှောကျ၌လေယာဉ်ပျက်ကျမှုဖြောင့်ကြိုးစားခဲ့လူသတ်မှုအဖြစ်ပုံရသည်။ ဦးဆောင်သောအရပ်တို့ကိုအနိုင်ရဘူဂေးရီးယားကားများအားဖြင့် - သင်သည်ဤအတန်းအစားခံစားထံမှကားများ၏အခြားကားတစ်စီးထုတ်လုပ်သူအပြစ်ဖြေကားများကြီးထွားလာအောင်မြင်မှုခြင်းဖြင့်ခြိမ်းခြောက်သည်ဟုထင်ပါသလား? သငျသညျအဘယျသို့ဆုံးရှုံးခဲ့ကြနှင့်သင်ဒီကားပျက်ကျမှုကနေဘာအနိုင်ရခဲ့တာလဲ
ဤသည်အလွန်မနှစ်မြို့ဖွယ်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဘယ်သူမှအတိအကျဒီတိုက်မှုပြီးနောက်ဖြစ်ပျက်, ငါသည်အလျှင်းမကအခြားယာဉ်မောင်းမဟုတ်အကျိုးဆက်များသိတယ်ခန့်မှန်းပေမယ့်ဘယ်အရာကိုငါပြောနိုင်ငါတော်တော်ကြီးမြတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ငါသည်ငါ့မိသားစုအတှကျပွောပွနိုငျငါ့ကိုလှည့်ပတ်သည်လူများအဘို့ဤတင်းမာမှုခဲ့ကြောင်း, ယနေ့ငါအခွင့်အလမ်းအားဖြင့်လေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့ဗီဒီယိုကိုမမြင်စဖူးခဲ့သူစင်္ကာပူတွင်သတ္တုတွင်းများ၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေနှင့်အတူစကားပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့အနိုင်ရခဲ့အဘယ်အရာကိုကွောကျရှံ့ခွငျး, etc ကြော်ငြာ, လူသိရှင်ကြားနှင့်ကျော်ကြားမှုတွေအများကြီးအများကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကကျွန်မခံစားမိပုံကိုမေးတယ်ဒါပေါ်မှာ .. ယေဘုယျအားဖြင့်ယာဉ်ကိုယ်နှိုက်၏အတွင်းပိုင်းကြောင့်အတွင်းပိုင်းစနစ်တကျဒီဇိုင်းနှင့်အလွန်လုံခြုံကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုနီးပါးဘာမျှမခံစားခဲ့ရခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တကယ်အရာအားလုံးပြင်ပတွင်အလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးအလွန်ကြောက်စရာလှပါတယ်။ မျှော်လင့်ကြောင်းနှင့်တူသောအရာတို့ကိုတော့ဘူးငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ခြင်းကို won`t ကြောင်းနှင့်ငါ box ကိုမြို့ရိုးနောက်ကွယ်မှအဓိကအားဖြင့်မတ်တပ်ရပ်မန်နေဂျင်းနှင့်အနာဂတ်အတွက်အသင်းများကိုထိန်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဆီသို့ဦးတည်ခေါင်းနှစ်လုံးကြသောအခါ, ငါတို့ကအမြဲမြန်ကျနော်တို့ချင်အဖြစ်တိုး don`t, ဆိုလိုသည်မှာအမှုအရာအစဉ်အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အလိုဆန္ဒများအရသိရသည် align don`t ။ သင်ကသေးငယ်တဲ့တဦးတည်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သွားစောင့်ရှောက်ဖို့ခက်ခဲကာလ၌သင်သည်လှုံ့ဆျောပင်လျှင်, ကျရှုံးခြင်းကဘယ်လိုရိပ်မိပါသလဲ?
ကောင်းပြီငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ပညာရှိသည်။ ငါကအခြားလူများကထိုလမ်းကိုမြင်ရခြင်းရှိမရှိမသိရပါဘူး။ ငါကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုခုသင်ပေးဖို့ထင်သောကြောင့်, အတိအကျဤနည်းဖြစ်ပျက်ဖို့နဲ့ဖြစ်ပျက်ယူဆခဲ့သည်ရှိခဲ့ကြောင်းအရာတစ်ခုခုအဖြစ်ပျက်ကွက်ရိပ်မိရ။
ကျွန်တော်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြအဘယ်ကြောင့်အဓိကအားဖြင့်ပြိုင်ကားရာသီအတွင်းနှစ်တွင်ငါတို့သည်အချို့သောတော်တော်လေးလေးနက်ပြဿနာများရှိခဲ့သောကြောင့်, ငါတို့သည်အလွန်ဂရုတစိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အဲဒီနောက်, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်, ငါတို့သည်ပပျောက်ဖို့ပြဿနာသည်အဘယ်မှာရှိနားလည်ရန်, အမှားဘာတွေလုပ်နေလဲ, ပြီးတော့တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစား အစိုင်အခဲမြေပြင်ပေါ်တွင်ခြေကုပ်ရဖို့နဲ့အရာအားလုံးကိုနည်းမှန်လမ်းမှန်ကိုစတင်ရန်။ ဒါကြောင့်ပျက်ကွက်လုံးဝမဆိုလမ်းထဲမှာငါ့ကိုတား doesn`t ။ ဆန့်ကျင်တွင်, ငါသည်ကိုယ်ကိုပြောပြ - ဤကျနော်တို့လာမယ့်အခိုက်အအတွက်ပိုကောင်းဖြစ်လာနိုင်အောင်, ဒီလမ်းဖွထင်ခဲ့သည်။ ဒါနဲ့သူတို့ရဲ့အမှားတွေကနေလေ့လာသင်ယူနှင့်ပေါ်ရွှေ့ဖို့ပြဿနာတစ်ခုခုရှိပြီးသူမည်သူမဆိုအကြံပြုသည်။
သင် startup လုပ်ငန်းရှင်တွေမှမဆိုအခြားအကြံပေးချက်များရှိပါသလား? သင်သည်သူတို့၏အတွေးအခေါ်များ, အိပ်မက်နှင့်ပန်းတိုင်သဘောပေါက်လိုက်ရှာမှာသူတို့ရဲ့လမ်းပေါ်နေသောလူများ, တို့အားပေးလိမ့်မယ်အရေးကြီးဆုံးအကွံဉာဏျကဘာလဲ?
ငါကလည်းသည်အတိုင်း, သင်သက်သက်သာစီးပွားဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှာနေနေကြတယ်, လျှင်, အကြှနျုပျအဘို့အမှုအရာဖြစ်ပျက်ကြပါဘူး။
ကားများ, ပုံစံ, သိန်ကားများ, အားကစား, startup | | rating:5/ 30